အင်တာနက်က Porn အတွက်ဦးနှောက်ထင်သလောက်ဘယ်လို (2015): Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်
“ Internet Porn သည် ဦး နှောက်အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်” သည် YBOP 2015-series စီးရီး၏ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နောက်ဆုံးထွက် version ဖြစ်သည်။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 30 မကြာသေးမီက neuroscience-based စာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? 80 ကျော်လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်. အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
အဘယ်အရာကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်ကောအသို့နည်း ၏ဤစာရင်းကိုထုတ်စစ်ဆေး 270 ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလေ့လာမှုများကျော်, ဒါမှမဟုတ်စာပေဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: ပြန်လည်သုံးသပ် # 1, review2, ပြန်လည်သုံးသပ် # 3, ပြန်လည်သုံးသပ် # 4, ပြန်လည်သုံးသပ် # 5, ပြန်လည်သုံးသပ် # 6, ပြန်လည်သုံးသပ် # 7, ပြန်လည်သုံးသပ် # 8, ပြန်လည်သုံးသပ် # 9, ပြန်လည်သုံးသပ် # 10, ပြန်လည်သုံးသပ် # 11, ပြန်လည်သုံးသပ် # 12, ပြန်လည်သုံးသပ် # 13, ပြန်လည်သုံးသပ် # 14, ပြန်လည်သုံးသပ် # 15, ပြန်လည်သုံးသပ်မှု # 16။ သုတေသန၏ဤ 2012 ပြန်လည်သုံးသပ်၏နိဂုံးမှသည် - ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအပေါ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း:
ညစ်ညမ်းစွဲ - neuroplasticity (2013) ၏အခြေအနေတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ့် supranormal နှိုးဆွ။
သဘာဝနှင့်တိုးပွားရင်သားကင်ဆာ: သဘာဝဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးမပါပဲဆိုတာဘာလဲ (2012)
ခေါ်ဆောင်သွားဆွငါးခုသည် Modes ဖြတ်ပြီးအထီးလိင်စိတ်နိုးထ။ (1988)
မျောက်အမျိုးသမီးမျောက်အောက်ဆုံးတွင်ကြည့်ပါရန် (2005) Pay
လိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့စဉ်အတွင်း eyeblink ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏ပြင်းအားအတွက်အပြောင်းအလဲများ (2000)
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2009) ၏ထကြွလွယ်သောနှင့် neuroanatomical ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ပဏာမစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု
လိင်စိတ်နိုးထသဘာဝကရွံရှာတုံ့ပြန်မှု (2012) လျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါ
ယောက်ျားများ ?: ဖိလိပ္ပု Zimbardo ၏နိဂုံးကို
20-18 နှစ်ပေါင်းအသက်ပြင်သစ်ယောက်ျား၏ 24% သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ရင်ခုန်စရာလှုပ်ရှားမှုမရှိအကျိုးစီးပွား (2008) ရှိဆိုသညျကား
လေ့လာမှု: အနိမျ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အသုတ်ရည်လွှတ်မမှန်ပိုမိုမြင့်မားငယ်ရွယ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် (2015) တွင်
ဗြိတိန်စစ်တမ်း: NSPCC စစ်တမ်း porn addictio (12) စိတ်ပူ 13 နှစ်အရွယ်မှတဦးတည်း-In-တစ်ဆယ် 2015 တွေ့ရှိခဲ့
အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၁၃ နှစ်ကြားဆယ်ယောက်လူငယ်များအတွက် 'အပြာစာပေစွဲလမ်းမှုစိုးရိမ်မှု' (BBC)
porn နှင့်ထိတွေ့အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများ, 80% စွဲ၏ 13.5% ထက်ပိုလေ့လာမှုကဆိုပါတယ်။ (2013)
အောက်မှာ-40 စစ်တမ်းရှားပါး: Porn ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးသလဲ?
အင်တာနက်ပြင်းထန်သောအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများကစိုးရိမ်နေကြသည် (၂၀၁၁)
Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှု, လေ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း
အဆိုပါလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးသမီး (2003) ပြောင်းခြင်းပြီးနောက်လိင်-Satiated ဆိတ်သငယ်အထီး (Capra Hircus) ၏ Ejaculatory စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Semen န့်သတ်ချက်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု
အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများ: လေ့လာမှုများ၏ collection များကိုအတူ YBOP စာမကျြနှာ
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုသုတေသနက Short တွေကို Summaries
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသရုပ်ပြလေ့လာရေးအဖြစ် ဖြစ်စေတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများ
ASAM ၏စွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် - မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ။
စွဲလမ်းမှု၏တစ်ဦးက Radical နယူးကြည့်ရန်သိပ္ပံမုန်တိုင်းမွှေ
အဆိုပါ DSM မဟုတ်ဇီဝ, အခြေပြုခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ်
အမျိုးသားစိတ်ပညာကျန်းမာရေးဌာန (NIMH) - DSM သည်ချို့ယွင်းချက်ရှိပြီးခေတ်နောက်ကျနေသည် - NIMH ၏ခေါင်းဆောင်က
စုစည်းမှုများ အခြေခံသိပ္ပံ, dopamine, အမူအကျင့်စွဲလမ်း, porn အသုံးပြုမှုသက်ရောက်မှု: ထောက်ပံ့လေ့လာမှုများ၏
စွဲ, လိင်နှင့်အပြုအမူအတွက် Dopamine ၏အခန်းကဏ္။
Dopamine နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု / ADHD
ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအလွန်အကျွံအပြုအမူ: သကြား & Junk Food
Porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်ခြင်း
"ကျွန်မယောက်ျားကဗီဒီယိုထဲမှာမသည်နှင့်ငါ့ကိုဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူး:" အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, ပုလ်, & Emerging လူကြီးအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ရောနှောထားသောနည်းလမ်းများလေ့လာ
"ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး Talking ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့မယ်လို့": လိင်အန္တရာယ်ရှိသောလိင်ကိစ္စအပြုအမူ (2017) တားဆီးအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်စော်ကားသူကိုလူငယ်များ
"တစ်ဦးက Man ဖြစ်လာဖို့လမ်း": အမျိုးသားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးအပေါ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လိင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
Objectification, fragment နှင့်စားသုံးမှုမှတဆင့် "သူမရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည် Breaking": ပြည်တွင်းလိင်လူကုန်ကူးမှု (2018) ကိုနားလည်ခြင်းအဘို့တစ်ဦးက Conceptual Framework ကို
"ငါကနည်းလမ်းများစွာအတွက်အနုတ်လက္ခဏာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုခဲ့ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ်ကသုံးပြီးရပ်တန့်လို့မရဘူးထင်တယ်": ငယ်ရွယ်သြစတြေးလျ (2017) ၏နမူနာအကြားကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု
dhat syndrome ရောဂါ (2014) နဲ့ညစ်ညမ်းစွဲ၏တစ်ဦးအမှုအစီရင်ခံစာ
တစ်ဦးကအန္တရာယ်များ၏နှိုင်းယှဉ်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု (2019) တွင်ကိုရီးယားကိုရီးယားနှင့်ပြောင်းရွှေ့လာသောလူကိုရီးယားအကြားအလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုဂိမ်း Play အတွက်ကာကွယ်အချက်များ
မှုန်ဝါးစေရန်မျက်နှာနဲ့အတူနှင့်မရှိရင် Visual လှုံ့ဆော်မှုထိတွေ့အမျိုးသားများအတွက်လိင်စိတ်နိုးထတစ်နှိုင်းယှဉ် (2019)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder နှင့်ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2018) ၏အပြုအမူဆိုင်ရာအာရုံကြောသိပ္ပံ၏တစ်ဦးကလက်ရှိနားလည်မှု
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး, ရွေးချယ် Exposure နှင့်မပျော် (2012) ၏သုံးသပ်အခန်းက္ပ: အမေရိကန်လူကြီးများ '' ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure တစ် longitudinal အားသုံးသပ်ခြင်း
- 2012 ပတ် porn ထံမှကြားနေညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့် One ရဲ့ Romantic Partner (3) ကိုအားနည်းစေကတိသစ္စာ: နောက်ဆုံးမဟုတ်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမေတ္တာ
ညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်ထုတ်ဝေသုတေသန (2000) ၏ Meta-analysis သည်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတစ်ဦးကအောက်မေ့မော်ဒယ်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရောဂါ (2018) နဲ့တဦးချင်းစီ၏ကုသမှုများအတွက်မော်ဒယ်တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ဂယက်ရိုက်
Zoophilic ရဲ့ Virtual ပတ်ဝန်းကျင် (2016) ပါဝင်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုများအတွက်စိတျရငျးတစ်ဦးကပဏာမမော်ဒယ်
အမျိုးသားများအတွက် (2019) တွင် Hypersexual Disorder များအတွက် Group မှအုပ်ချုပ်ခွင့်ရသိမှုအပြုအမူကုထုံး၏ကျပန်းထိန်းချုပ်လေ့လာ
ကိုစှဲအပြုအမူအတွက် Impulse နှင့် compulsive ၏တစ်ဦးကစနစ်တကျတွင် Meta-သုံးသပ်ချက် (2019)
ဖှဲ့အကဲဖြတ် (2015) ကိုသုံးပြီးတစ်ဦးကအွန်လိုင်းလိင်စွဲလမ်း၏စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက်နှင့်လက်တွေ့ကုသမှု
ကြည့်ရှုပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (2010) အတွက်ကုသမှုအဖြစ်လက်ခံမှုနှင့်ကတိကဝတ်ကုထုံး
ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်လက်ခံမှုနှင့်ကတိသစ္စာကုထုံး: ကျပန်းစမ်းသပ် (2016)
ဗဟို၌အမျိုးသမီးများဆန့်ကျင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အကြမ်းဖက်မှု: တစ်ကျေးလက်ဒေသအရှေ့တောင်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်လေ့လာမှု (2016) မှစ. ရလဒ်များ
အသက်, မှထုတ်ပြန်သောနှင့်လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဗွီဒီယိုများ (2018) တွင်ပျော်ရွှင်မှု
ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ update ကို (2010)
အကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်း (1999) မှယောက်ျားရဲ့စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုတုံ့ပြန်မှု၏ဆုံးအဖွတျအဖြစ်အရက်နှင့် hypermasculinity
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် Stroop Task ကို (2018) စဉ်အတွင်းပြောင်းလဲ Prefrontal နှင့်ယုတ်ညံ့ Parietal လှုပ်ရှားမှု
တစ်အွန်လိုင်း Group မှဖိုရမ်မှ Post တစ်ခုရှေးဟောင်းယဥ်ကျေးမှုအကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်း: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2018) မှရှောင်ပုဂ္ဂိုလ်များ။
ကျောင်းသားလိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းတိုင်ပင်မှူးမတ် '' အလုပ်တစ်ခုစာမေးပွဲ: သင်တန်း, စိစစ်ခြင်း, ရည်ညွှန်း (2018)
ကွဲပြားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ၏ centerfold ပုံရိပ်တွေထိတွေ့အောက်ပါယောက်ျားကိုကြည့်ဆီသို့အမျိုးသမီးငယ်ရဲ့သဘောထားတစ်ခုစမ်းသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2015)
ဝန်ထမ်းများ '' အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲများနှင့်အဖွဲ့အစည်းရလဒျ (2019) ရက်နေ့တွင်လုပ်ငန်းခွင်သားကောင်တစ်ဦးလွှမ်းမိုးမှု
အင်တာနက်သုံးစွဲမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, ရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် Nonsexual Sensation နှင့်ကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2007) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive
ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ် Hypersexual အပြုအမူ (2015) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့တစ်ခုအွန်လိုင်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အကဲဖြတ်, စိတ်ဓာတ်, နှင့်လိင်စရိုက်များ Variables ကို
Long-Term လိင်အရည်အသွေး (2018) ပီသသူရဲ့ကွာခြားချက်က Short-Term အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုတစ်ခုအဖွဲ့အစည်းမူဘောင်
တစ်အမျိုးသားအဝန်းနမူနာအတွက် Pedophilic အကျိုးစီးပွားနှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အတူလိင် Drive ကိုနှင့် Hypersexuality Associated ဖြစ်ပါသလား (2015)
arousal အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်များနှင့်အမျိုးသားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း (2014)
အဆိုပါဥပစာ (2019) ထက်ကျော်လွန်သွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ဖြစ်စဉ်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ objectified လူ့ပစ်မှတ်များနှင့်တ္ထုဆီသို့ဦးတည်အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်
အင်တာနက်ကိုလိင်ကိစ္စများ (2014) ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသရေး
ပြင်သစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျား (2019) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အိပ်စက်ခြင်းကကျန်းမာရေးအကြားအစည်းအရုံး
သီးခြားအင်တာနက်ကလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘဝကျေနပ်မှုအကြားအစည်းအရုံး: အထီးကျန်ခြင်းနှင့်စီးပွားပျက်ကပ်၏အာမခံအကျိုးသက်ရောက်မှု (2018)
သဘောထားများနှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု၏အန္တရာယ်အချက်များ: တစ်ခုကစူးစမ်းလေ့လာရေးလေ့လာမှု (2018)
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှု: ပျှမ်းမျှသို့မဟုတ် supernormal များအတွက်ဦးစားပေးမှု? (2017)
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆက်ဆံဖို့ naltrexone နှင့်အတူတိုးပွား: တစ်ကိစ္စတွင်စီးရီး (2010)
Bareback ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသားများနှင့်အတူလိင်ထားရှိခြင်းသည်လူကို Safe-လိင်ရည်ရွယ်ချက်များ (2012)
ဘီဘီစီ porn watchers20-18 ၏ 25% ကလိင် (2019) ရှိသည်ဖို့သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်လျက်ရှိသည်ဟုပြောအကြံပြု
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စားသုံးသူဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တစ်ဦးက taxonomy နဲ့ content ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2018): အင်တာနက်, ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစွဲဘို့အပြုအမူပြောင်းလဲမှုမဟာဗျူဟာများ
အပျော်အပါးနှင့် arousal ကျော်လွန်: အစာစားချင်စိတ်ခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုအစောပိုင်းအာရုံကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ (2013) ၏ electrophysiological ဦးနှောက်ဆက်စပ်မှု modulate
Intertemporal ရွေးချယ်မှုအတွက်ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ပယောဂ Generalized စိတျမရှညျ (2008)
ခန္ဓာကိုယ်: ကောလိပ်ကျောင်းသားများ (2018) အတွက်အဖြေက Short လိင်စွဲလမ်းစစ်ဆေးခြင်း Tool ကို
ခန္ဓာကိုယ် dysmorphic ရောဂါနှင့်လိင်, Impulse နှင့်စွဲရန်၎င်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး (2019)
လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများ၏ဦးနှောက် Image: လတ်တလောဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်အနာဂတ်ဦးတည် (2017)
ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကလေ့လာမှု: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ (Voon et al, 2014 ။ ) မူးယစ်ဆေးစွဲကိုထင်ဟပ်
ပေါ်တူဂီအတွက်ထောင်ချခံရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: ညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှု, သားကောင်များနှင့်ရာဇဝတ်မှုဘက်စုံသုံး၏ရွေးချယ်မှုအတွက် transversality (2018)
မြင့်လိုက်ဖမ်း: ပြင်းထန်တဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (2019) အပေါ်စွဲလမ်းနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
compulsive, Impulse နှင့်စှဲ & Models (2008): Hypersexual Disorders ခွဲခြား
အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအထူးပြုကုသမှုအတွက်ကျဘာစွဲ (2012) ၏ကုသမှုများအတွက်လက်တွေ့နှင့် Ethical ထည့်သွင်းစဉ်းစား
လိင်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2018) Clinician '' Clients တွေအနေနဲ့နှင့်စပ်လျဉ်းယုံကြည်ချက်, လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကုသမှုထိရောက်မှု ''
Coercive နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပြဿနာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းမက္ကဆီကိုရှိတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2019)
လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်အကြမ်းဖက် nonsexual ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်အဆင့်အတန်းကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (1995)
အထီးစစ်ရေးစစ်ပြန်ကြားတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လက်တွေ့အချက်များ (2014)
လူသားတွေဟာနှင့် Preclinical & Models (2018) တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြား: A nonjudgmental ချဉ်းကပ်။ ကန့်သတ်သက်သေအထောက်အထားနေသော်လည်း, ဒီရောဂါတိကျစွာရောဂါနှင့်အောင်မြင်စွာ (2018) ကုသနိုင်ပါတယ်
အင်တာနက်ကို-based လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများ၏ compulsive အသုံးပြုမှု: အ compulsive အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းစကေး (CIUS) (2014) ၏လိုက်လျောညီထွေနှင့်အတည်ပြု
အဆိုပါရောဂါဗေဒမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှုနှင့် Non-မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် (2016) ကိုဖြတ်ပြီး compulsive
, ဇီဝဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဏရှုထောင့် (2018) တွင်ညစ်ညမ်းကသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏လက်ရှိခွဲခြား
ဆိုက်ဘာ-porn မှီခို: အီတလီအင်တာနက် Self-အကူအညီနဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ရောက်သောအသံ (2009)
ကိုရီးယားကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားဘာစွဲ: Current Status နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထား (2013)
ဘာစွဲ: တဏှာနှင့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များ (2012)
ဘာစွဲ: ဘာကမ်းလှမ်းမှုများအလုပ်မဖြစ်အသုံးပြုမှု၏ပျံ့နှံ့မှု (2012)
ဘာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှု: ကျန်းမာရေးပညာရေးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2007)
ဘာအသုံးပြုသူများ, ချိုးဖောက်မှုများနှင့် compulsive: နယူးတွေ့ရှိချက်များနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2000)
ကျဘာ, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ရငျးနှီး: psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (2018) နဲ့လူဦးရေအကြားတွင်တစ်ဦးရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်လေ့လာမှု
စီးပွားပျက်ကပ်, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်များအတွက်လူနေအိမ်ကုသမှုလူတို့တွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း (2017) ၏အခန်းကဏ္ဍ
စီးပွားပျက်ကပ်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်မြို့ပြလူငယ်ဂေးများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျားများထဲတွင်လိင်အန္တရာယ်-ယူ: အဆိုပါ P18 အလိုက်လေ့လာမှု (2016)
ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ညစ်ညမ်းဝယ်ယူတာဝန် (2018) ၏ psychometric အကဲဖြတ်
ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသည်တစ်ဦးကနယူးစစ်ဆေးခြင်း Tool ကို၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: အဆိုပါဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲစမ်းသပ်ခြင်း (CYPAT) (2018) ၏ Psychometric Properties ကို
DSM-5 စံ (2018) အပေါ်အခြေခံပြီးလိင်စွဲလမ်းစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ
child sexual abuse နှင့်မုဒိန်းမှုကျူးလွန်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများ (2019)
သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် 2000 (2019) ကတည်းကဂျပန်လူငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားပျက်ကပ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု
ကလေးများနှင့်လူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက် Deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: ကြိမ်နှုန်းနှင့်ပုံစံများ (1998)
hypersexual သို့မဟုတ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (10) ကဒီရောဂါ၏ငြင်းပယ်ခံရရှိနေသော်လည်း ICD-5 နှင့် DSM-2016 သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်
Disinhibited ဖျောထုတျအပြုအမူ, Hypersexuality နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်တဲ့ 42-တစ်နှစ်တာအဘိဓါန် Old အမျိုးသားလူနာ (2017) တွင် Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးဆက်အဖြစ်
အဆိုပါ MMPI-2-RF သုံးပြီး hypersexual လူတို့အားလက်ထပ်မိန်းမတကာတို့ထက် psychopathology ၏အယူအဆငြင်းခုံ။ (2011)
ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု (2017) ၏အခန်းက္ပ Exploring
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ကိုပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုတိုးပွားစေသလား တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု (2014)
တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှု (2019): အင်တာနက်ချိန်းတွေ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲဖျန်ဖြေပါသလား
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနုတ်မစျယာနျဘာသာတရားကိုကျော်အချိန်ကိုကြည့်ရှုခြင်းပါသလား? Two-Wave ကို Panel ကိုဒေတာများ (2016) မှစ. သက်သေအထောက်အထား
ကြည့်ရှုခြင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေးကျော်အချိန်ကိုလျှော့ချပါသလား? longitudinal ဒေတာများ (2016) မှသက်သေအထောက်အထားများ
X-rated ဗီဒီယိုခွေများ (1988) တွင်ကြီးစိုးနှင့်မညီမျှမှု
တစ်လူမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေအထီးကြွက် (2018) တွင်စွဲဘို့အားနည်းချက်ပိုကောင်းစေပါတယ်
သူတို့၏အမျိုးသမီးလိင်အပေါင်းအဖေါ်များ (1984) ၏လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ Aesthetic အမြင်အပေါ် Erotica ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အမျိုးသမီးလိင် (2016) ရက်နေ့တွင်ပျော့ core ကိုညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
မိသားစုအပေါ်ကျဘာစွဲ၏ဆိုးကျိုးများ: စစ်တမ်းတစ်ခု၏ရလဒ်များ (2000)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်၏သည်းခံစိတ်အပေါ်လိင်-stereotyped ဗီဒီယိုဂိမ်းဇာတ်ကောင်မှထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ (2008)
Suboptimally ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကငျြ့တရားစီရင်တော်မူခြင်းအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံများတင်ဆက်: တစ်ဦးက Cross-ယဉ်ကျေးမှုနှိုင်းယှဉ် (2016)
စိတ်လှုပ်ရှားမှုဝန်ကိုထမ်းရွက် Impulse ယောက်ျား (2018) တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စွဲလမ်းအသုံးပြုခြင်းကိုခန့်မှန်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်
Cotonou အတွက်ဆေးရုံ်ဆောင်မှုများအတွင်း Erectile အလုပ်မဖြစ် (ED) (2017)
မေတ္တာနှင့်လိင်များအတွက်ဥရောပအဟောင်းတွေလူကြီးများ '' အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်လူမှုကွန်ယက် (2018)
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ချဉ်းကပ်: ပေါင်းစပ်ညစ်ညမ်းဦးစားပေး, ရေတိုရေရှည်မိတ်လိုက်နှင့်ဖောက်ပြန် (2019)
တစ်ကိုယ်တော်နှင့်မျိုးစုံကိုကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်မုဒိမ်းမှု proclivity (2019) တွင်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်မုဒိမ်းကျင့်ထောက်ခံသိမြင်မှု၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ပါ
အလွန်အကျွံညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: Empire-တိုးမြှင်ကုသမှုကြားဝင် (2016)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထိတွေ့၏စမ်းသပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု: အဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏စီမံခန့်ခွဲမှု Effect နဲ့လိင်စိတ်နိုးထ၏ဖျန်ဖြေ Effect (2014)
စိစိလူနေထိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကုသမှု (2019) တွင်လူကြီးများများထဲတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ Exploring
Hypersexual အမျိုးသားများအတွက် (2010) မှအိမ်ထောင်သည်အမျိုးသမီးများအနက် Psychopathology, စရိုကျမြားနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ Exploring
ခေါ်ဆောင်သွားသည့် latency ကာလအတွင်းမှာတော့ Disruption နှင့်လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှု, အွန်လိုင်းလိင်အပြုအမူများနှင့်လူငယ်လူကြီး (2009) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ကြားဆက်ဆံရေး Exploring
တစ်ဦးအရည်အသွေးစစ်တမ်း (2018): လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလုလင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်, နားလည်မှုနှင့်အလေ့အကျင့်အကြောင်းကြားလမ်းကိုစူးစမ်းခြင်း
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် & Emerging လူကြီး (2017) မှတဆင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုလမ်းကြောင်း Exploring
မုဒိမ်းမှုဒဏ္ဍာရီ၏ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လက်ခံမှုကိုမှ exposure (1995)
လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းမှထိတွေ့မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်လေးစားမှု, အင်္ဂါသဘောထားကှဲလှဲမှုနှင့်ကနေဒါအမျိုးသားများ (2007) ၏နမူနာအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချစ်ခင်လေးမြတ်
မုဒိမ်းမှုဆီသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်သဘောထားများမှ Exposure: လေ့လာမှုရလဒ်တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (1989)
၏စည်းရုံးရေးမှူးများနှင့်အီရန်အမျိုးသမီးများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive မှအတားအဆီး (2017)
ဘာ၏အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအသုံးပြုသူများ (2015) အကြားရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဘာအသုံးပြုမှုနှင့်အခက်အခဲများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းအချက်များ
စိတ်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းနှင့်လိင် compulsive နှင့်အတူ HIV ပိုး-အပြုသဘောဆောင်သောဂေးများနှင့်ရိုးရိုးအမျိုးသားများအဘို့က HIV ဂီယာအန္တရာယ်အပြုအမူကိုလျှော့ချဖို့ Emotion စည်းမျဉ်းဥပဒေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး (2017) ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ
စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်-သွေးဆောင်ရှောင်ရှား၏ခံစားချက်များကိုအမျိုးသမီးများအတွက်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ (2012) အောက်ပါအားနည်းစေ
အမျိုးသမီးအလှကုန်အင်္ဂါခွဲစိတ်ကုသ: လူနာလက်ခဏာ, Motivation နှင့်ကျေနပ်မှု (2018)
လူငယ်-oriented ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2016) တွင်စိတ်ဝင်စားမှု၏တစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း: Lolita ရှာဖွေခြင်း
ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစားနပ်ရိက္ခာစွဲ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေရှာဖွေရေးနှင့် non-လက်တွေ့နမူနာများတွင်အလုပ်အမှုဆောင်လည်ပတ်အခက်အခဲများ (2019)
အခမဲ့လူကြီးကအင်တာနက် Web ကိုဆိုဒ်များ: degradation တမန်တော်ဘယ်လိုပျံ့နှံ့ဖြစ်ပါသလား (2010)
Playboy မှစ. အကျဉ်းထောင်မှ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုဟာရာဇဝတ်မှု (2019) ဖွစျလာရတဲ့အခါ
Furry လိင်: အေးစက် Fetishes ခေါ်ဆောင်သွားပစ်မှတ်အထောက်အထားပြောင်းပြန်ထက် သာ. ကောင်း၏ရှင်းလင်းချက်
လိင်တူချစ်သူ Porn ရဲ့ Bareback အရှိန်အဟုန် (2018)
လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကိုဗီဒီယိုများ (2015) ၏တစ်ဦးကအကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်း: ကျားအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်တန်းတူရေး (ခုနှစ်တွင်)
Escapist အတွက်ကျားကွာခြားချက်များလိင်အကဲဆတ်သောအင်တာနက်ကိုပစ္စည်း၏အသုံးပြု: ဂျာမန်ဖြစ်တန်ရာကိန်းနမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များ (2018)
ညစ်ညမ်း Vignette (1999) ကိုကြည့်ရှုခြင်းမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ
ကျား, မ, ကိုထိခိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (2008) အတွက်တွန်းအား
တစ်ဦးက Porn ကြည့်အလေ့အထများအပေါ်လေ့လာမှုနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင်အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Fantasy အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (2016): အားလုံးလမ်း Going
သူမည်သူမဆိုထဲသို့ရုံဒါကမင်: ဆွဲဆောင်မှုအပေါ်လိင် Fantasy ၏သက်ရောက်မှု (2016)
ရင်ခုန်စရာငြင်းပယ်ခံရအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြိုးသမီးမြားအပျေါအမြင့်အထီးကျူးကျော်: လိင်ရည်မှန်းချက် activation (2018) ၏အာမခံအခန်းကဏ္ဍ
ကရေတိုရေရှည် psychosexual မော်ဒယ်အတွင်းနှောင့်နှေးသုတ်ရည်လွှတ်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လိုခက်ခဲပါသလဲ တစ်ဦးကအမှုလေ့လာမှုနှိုင်းယှဉ် (2017)
ဘယ်လိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကွန်ဂခေါင်းဆောင်မှုအတွက်ပါဝင်လာခြင်းကိုလျှော့ချ: တစ်ဦးကသုတေသနမှတ်စု (2018)
PTSD တစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ် Hypersexual အပြုအမူ: စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာ-Related PTSD (2019) နဲ့တစ်ဝါရင့်အတွက်သိမှုထုတ်ယူခြင်းကုထုံးကိုအသုံးပြုခြင်း
အထီးတစ်ခုအွန်လိုင်းနမူနာအတွက် Hypersexual အပြုအမူ: ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခနှင့်အတူအသင်းနှင့် Functional ချို့ယွင်း (2013)
ကိုယ်ပိုင်ဖော်ထုတ် Hypersexual အပြုအမူ (2017) နှင့်အတူအကူအညီ-ရှာဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင် Hypersexual Disorder စစ်ဆေးခြင်း Inventory အဆိုအရ Hypersexual Disorder
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2001) နှင့်အတူ Hypersexual Disorder နှင့်အဆက်မပြတ်
Hypersexuality စွဲနှင့် Withdrawal: Phenomenology, Neurogenetics နှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်း (2015)
Hypersexuality နှင့်မြင့်မားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire: ပြဿနာလိင်၏ဖွဲ့စည်းပုံ Exploring (2015)
အဆိုပါ neurobiology နှင့်ကုသမှုရွေးစရာများ (2018): တစ်ဦးအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါ Disorder အဖြစ် Hypersexuality
Hypersexuality, ကျားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှေ့တိုင်းဆန်တစ်အကြီးစား Psychometric စစ်တမ်းလေ့လာမှု (2018)
Impulse, တားစီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုရောဂါ (2017) တွင်တဏှာ
တစ်ဦးချင်း-based compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစကေး: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဆန်းစစ်အတွက်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အရေးပါမှုကို (2017)
ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်တရုတ်လိင်ကွဲတစ်ဦးချင်းစီအကြား OSA အတွေ့အကြုံများအပေါ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (OSA) ၏ရိပ်မိဖောက်ပြန်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု? (2018)
Sociosexuality နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ကတိ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း၏သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာ၏အာမခံ Effect (2019)
စတင်နှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု: အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2000)
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive ၏ Initiative နှင့်ကို Maintenance: အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု (2004)
ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေထိရောက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault အောင်ကာကွယ်နိုင်မစိတ် (2013) ၏ဘီဘာအိုသို့စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုပေါင်းစပ်
စည်းကမ်းတအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု (2019) ၏ကွဲပြားဒီဂရီနှင့်အတူလိင်ကွဲအထီးအတွက်တဏှာနှင့် functional ဖြစ်စေကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစတိုင်များ၏ interaction
အမျိုးသားတို့တဘက်၌အင်တာနက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ - အိန္ဒိယကနေရာဇဝတ်မှုဗျူရိုစာရင်းဇယားတစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2015)
အင်တာနက်ကိုစွဲ: ဘာ (2013)
ဆိုက်ဘာအလေ့အထကနေ psychopathology မှမော်ရိုကိုအင်တာနက်နှင့်လိင်, (2013)
အင်တာနက်ကလောင်းကစားများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: ဆက်သွယ်ရေးမင်းမဲ့စရိုက်၏စိတ်ဓာတ်အကျိုးဆက်များ၏ Illustrator ဥပမာများ (1999))
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အထီးကျန်ခြင်း: တစ်ခုကအသင်းမှ? (2005)
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် pedophilia (2013)
ဖိလစျအိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးချင်း (2016) ၏အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေးကတိသစ္စာ
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ Exposure နှင့် Extramarital လိင်ဆီသို့အမျိုးသမီးများသဘောထား: တစ်ခုကစူးစမ်းလေ့လာရေးလေ့လာမှု (2013)
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ပေါင်းစည်းမှု (2019)
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းနှင့်၎င်း၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ: တစ်အစီရင်ခံစာ။ (2015)
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2012)
အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲ: အန္တရာယ်အချက်များ, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ကုသမှု (2008)
ဘာသာရေးလူနာများအတွက် Hypersexual အပြုအမူများစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းဆက်စပ်မှု (2016)
အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အမျိုးသား Hypersexuality ၏အသှငျအပွငျရှိပါသလား? တစ်အွန်လိုင်းလေ့လာမှု (2015) မှရလဒ်များ
အမြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire အမျိုးသမီးများနေ့ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပြီ-ခံများအတွက်အန္တရာယ်ဖြစ်သနည်း (2015)
လူမှုအဆင့်အတန်းကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းမှ Related လား? - အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ် GSA အတွက်စစ်တမ်းများ: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်အစောပိုင်း 2000s (2015) မှအထောက်အထား။
DSM-V ကိုများအတွက်ကိစ္စများ: အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှု (2008)
ကွန်ဒုံး၏ gonzo ညစ်ညမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်ကိုရီးယားအမျိုးသားအကျိုးစီးပွား (2019)
လိင်, Impulse, compulsive နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးကြီးများနမူနာ (2019) တွင်စွဲအကြား links
ဗိုလ်မှူးလှုံ့ဆျောမှုနှင့်အမျိုးသမီးခံယူ Labiaplasty (2018) ၏ Sociodemographic အင်္ဂါရပ်များ
တပြိုင်တည်းသမ်ဖက်တမင်းနှင့်အမျိုးသားသည်အထိအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံပြီးနောက် Maladaptive လိင်အပြုအမူတိုကျရိုကျ Cortex အတွက် ALTER ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်ချက် (2017) နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
ဆေးခြောက်အသုံးပြုမှု, ဆေးခြောက်ကိုမျှော်လင့်ခြင်း, ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြား Hypersexuality (2017)
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ဘယ်လိုအတော်များများအခန်းကဏ္ဍ: တာရယ်လိင်ကွဲအမျိုးသားများနှင့်အတူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire လျော့နည်းသွား? (2014)
တူညီသည့်အလက်ခဏာ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး (2015) - Hypersexual Disorder နှင့်အတူယောက်ျား
ယောက်ျားရဲ့အပန်းဖြေနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့ဘဝတွေကို: အမျိုးသမီးများ၏အပေါ်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု (1999)
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်ပြဿနာအပြုအမူ (2016)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (2011) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုအပြုအမူ
တစ်ဦး dalliance ထက်ပိုမို? လက်ထပ်အမေရိကန်လူကြီးများ (2014) ကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် extramarital လိင်သဘောထားများ
40 အောက်မှာမဲဆန္ဒရှင်၏ထက်ဝက်ထက်ပိုဖြစ်စေ (2015) porn သူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးနေသည်ထင်, သို့မဟုတ် "မသေချာ" များမှာ
Cyberporn မူတည်၏ကိုယ်ပိုင်အကူအညီများ၏ဇာတ်လမ်းများ (2008)
ပါကင်ဆန်ရောဂါ (2013) တွင် dopamine ကုသမှု-နှင့်ဆက်စပ် hypersexuality အတွက်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု
ပြဿနာ Hypersexual အပြုအမူနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire ၏အာရုံကြောအလွှာ (2015)
Hypersexuality ၏ Neurobiological အခြေခံ (2016)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ Neurobiology - တစ်ဦးကလက်တွေ့သုံးသပ်မှု (2017)
အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲဖို့ Neuroscientific သို့ချဉ်း ကပ်. (2017)
Looking, ညာဘက်မှာရှိတဲ့အဘယ်သူမျှမထိခိုက်နစ်နာမှု? ယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု, ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်နှင့်ကောင်းပြီ-ခံ (2014)
အမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်း၏အကြောင်းတရားများ၏ Nonprofessionals '' သညာ (2019)
လိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာ၏ Normal, ပြဿနာနှင့် compulsive စားသုံးမှု: အ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုကို အသုံးပြု. လက်တွေ့တွေ့ရှိချက် (CPC) အမျိုးသားများအတွက် (2015) နဲ့လိင်ရှိသည်သောယောက်ျားတို့တွင်အတိုက်ဖျက်ရေး
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် neuroplasticity အပေါ်-Norman Doidge: "ကိုယ်နှိုက်ကလည်းပြောင်းလဲဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါဦးနှောက်" (2007)
စာနာမှုမရှိခြင်းအတွက်အမျိုးသမီးတွေရလဒ်များ Objectification (2018)
အွန်လိုင်း porn စွဲ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး: လွယ်ကူစွာထိခိုက်အချက်များ, ခိုင်ခံ့စေယန္တရားများနှင့်အာရုံကြောယန္တရားများတစ်ဦးချင်းစီ: ဘာစွဲ၏ကနဦးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ: တစ်ဦးချင်းအားနည်း, စစ်ကူယန္တရားနှင့်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရား (2019)
ပြည်မကြီးကတရုတ်တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု: ဆက်ဆံရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုမှရှာကြံနှင့် sociosexuality (2015)
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်: Potentially ပြဿနာ behavior (2004) ၏တစ်စာမေးပွဲ
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများအမျိုးသမီးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများထဲတွင်နောက်ပိုင်းလိင်ကျန်းမာရေးနှင့်သားကောင်များရလဒျကိုခန့်မှန်းမြား: A ငုပ်လျှိုးနေ Class ကိုသုံးသပ်ခြင်း (2019)
အဆိုပါ EMS ၏အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ-ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏စစ်ဆင်ရေး (2018)
ပြည်သူ့အရာဝတ္ထု, မကလူ (2012) အဖြစ်အမျိုးသမီးများ sexy ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ရှု
ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူ၏သဘောထားအမြင်: Comparing ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း (2012)
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပစ္စည်းဥစ္စာ၏ profile များကိုများနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (2018)
စရိုကျမြားနှင့် University အမျိုးသားကျောင်းသားများအဖွဲ့ (2019) အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ Associated
arousal အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေး: အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များပါဝင်သော porn အသုံးပြုမှုလေ့လာမှုများ
အရည်အသွေးနှင့်အရေအတွက် 10-တစ်ပတ်ကြာဒိုင်ယာရီအကဲဖြတ် (2018): compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ကုသမှုရှာကြံယောက်ျား၏အဓိကလက္ခဏာအဖြစ်ညစ်ညမ်း Bing
ညစ်ညမ်းစွဲ - Neuroplasticity (2013) ၏ဆက်စပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးက Supranormal stimulus
Neurophysiological တွက်ချက်ချဉ်းကပ် (2018) အပေါ်အခြေခံပြီးညစ်ညမ်းစွဲထောက်လှမ်းခြင်း
ညစ်ညမ်းစွဲ: ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ် Diagnostic စနစ်များအတွက်ထည့်သွင်းရန်စဉ်းစားသင့်သလော (2016)
ညစ်ညမ်းပြီးအဖော် (2019) နဲ့လိင်ကွဲအမျိုးသမီး Intimate အတွေ့အကြုံများ
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှု: ဗိုလ်မှူး YouTube ကိုပြတ်တောက် (2019) မှအထောက်အထား
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အဲဒီမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါတို့သည်သူတို့နားလည်နိုင်သလဲ (2000)
ညစ်ညမ်းနှင့်အမျိုးသားလိင် Script: An စားသုံးမှုလေ့လာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး (2014)
ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် intrafamilial နှင့် extrafamilial ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအဖွဲ့အစည်း: တစ်အယူအဆရေးရာမော်ဒယ် (1997) Developing
ညစ်ညမ်းနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါး: သြစတြေးလျမှာနေတဲ့လူငယ်အမျိုးသမီးတွေထဲကနေ Accounts ကို (2019)
တစ်ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအဖြစ်ညစ်ညမ်း: အကြမ်းဖက်မှုနှင့်အသုံးချလှုံ့ဆော်မှုများကိုကလေးများ၏, လူငယ်နှင့်လူကြီးများ (2018) မြှင့်တင်ရေး
ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အစားထိုးအဖြစ်ညစ်ညမ်း: စွဲယန္တရား (2018) ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်တစ်ခုထွန်းသစ်စချဉ်းကပ်
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ကျေနပ်မှု: တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2017)
ကျား, မကျပုံစံနှင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ (2017) ၏စကားစပ်မှာနေတဲ့လူငယ်လူကြီးများ၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု
တစ်အကြီးစားအင်တာနက်ကိုနမူနာ (2018) တွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, ပုံစံများနှင့်ရာထူးအမည်
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ကြားရေးအဖြစ်ညစ်ညမ်း၏သဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း (2018)
လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင်ညစ်ညမ်းသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2019)
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေးအရည်အသွေး: အကငျြ့တရား Incongruence Hypothesis (2017) စမ်းသပ်စဉ်။
အစောပိုင်းလူကြီးစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အိမ်ထောင်ရေး Entry: လူငယ်အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ဦး Panel ကိုလေ့လာ မှစ. တွေ့ရှိချက် (2018) ။
ယင်းအညွှန်းကိန်းပြစ်မှုများ၏အချိန်မှာလိင်ကျူးလွန်သူများအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: စရိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ခန့်မှန်း (2019)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: ရောဂါလက္ခဏာတွေအစာစားခြင်းခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုနှင့်အတူအသင်း, ဟိုစတီရွိုက်နှင့်အသက် (2017) ၏အရည်အသွေးကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းအတှေး
အပြာစာပေအသုံးပြုမှု - လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာအမျိုးသားများ၏ဘ ၀ များနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအပေါ်သက်ရောက်မှု (၂၀၁၈)
ညစ်ညမ်း, အလိုလိုကျနှင့်လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်ခုကလူမှုရေးသင်ယူမှု၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှင်းလင်းချက် (2019)
porn ကဲ့သို့သောလိင်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, လူရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု (2019) အတွက်ညစ်ညမ်း, preference ကို
ညစ်ညမ်း, လိုက်စားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုမျိုးစုံကိုရှုထောင့်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မြိုးမြိုးအသင်းအဖွဲ့များ (2017)
ညစ်ညမ်း, ဆက်ဆံရေးအစားထိုးခြင်း, Intimate Extradyadic အပြုအမူ (2013)
ညစ်ညမ်း: သက်ရောက်မှု (1971) ၏တစ်ဦးစမ်းသပ်လေ့လာမှု)
Psychometric Properties ကိုများနှင့်ကျားမလျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလို (9): အဆိုပါဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-2019 ၏ပေါ်တူဂီဗားရှင်း
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအလားအလာကျန်းမာရေးအန္တရာယ်စိတ်ရောဂါသူနာပြုများ (1994) ကရှုမြင်ကြသည်အဖြစ်
, STD ဆေးခန်းတက်ရောက်ခဲ့ကြသောလူတို့သညျ (MSM) နဲ့ Kalubowila လိင်ရှိသည်သောယောက်ျားတို့တွင်အနိုင်သည့်အလားအလာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲ (PSA): တစ်ဖော်ပြရန် Cross-Section လေ့လာမှု (2019)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးမျိုး Levels နဲ့ထိတွေ့၏အခန်းက္ပ (2016): ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေထိရောက်မှုနှင့်ကောလိပ်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်စိတ်ခန့်မှန်း
တစ်ဦးချင်းစီခြားနားချက် variable တွေကို (2009) ၏အခန်းကဏ္ဍ: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် arousal ခန့်မှန်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခန့်မှန်း: ယေဘုယျနှင့်တိကျသောအန္တရာယ်အချက်များ (2007) ၏အခြေအနေတွင်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို
ဆွီဒင်တွင်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ (2003): အင်တာနက်ကိုလိင်များ၏အနာဂတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း
ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခံရသူနှင့်ကျူးလွန်သူများခန့်မှန်းမြား: A longitudinal လေ့လာမှု (2018)
သည်အခြားယောက်ျား (2019) ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနည်းစုယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ objectification ၏ခန့်မှန်း
တစ်ဦး Brno တက္ကသိုလ်ဆေးရုံလေ့လာမှု (ချက်သမ္မတနိုင်ငံ) အကြောင်းကိုစာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိ: "တစ်ဦးဆက်ဆံရေး Killer အဖြစ် babyish" (2018)
ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အီသီယိုးပီးအတွက်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်၏ဆုံးအဖွတျ: စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည် (2017)
ပြဿနာဘာ: Conceptual, အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှု (2015)
ပြဿနာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: အဆိုပါတဏှာ၏အခန်းကဏ္ဍ, အလိုဆန္ဒအတှေးအချေါမြားနှငျ့ metacognition (2017)
ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကို (PIU): အဆိုပါထကြွလွယ်သော-compulsive ရောင်စဉ်နှင့်အတူအသင်း။ Psychiatry အတွက်စက်သင်ယူမှု၏လျှောက်လွှာ (2016)
ပြဿနာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: တစ်ဦးကမီဒီယာတက်ရောက်အမြင် (2015)
မှေးဖှားနိုငျသုခချမ်းသာများနှင့်ညစ်ညမ်း - script ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ။ တစ်ဦး ethological မှန်ဘီလူး (2019) မှတဆင့်ထင်ရှားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှု
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း Myth ဟာအတည်ပြုချက်: Sexism ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသားကောင်သမိုင်း, ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ရေး (2018)
ပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက် Psychometric တူရိယာမြား: A စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ချက် (2019)
လီမာအတွက်အရွယ်ရောက်တဲ့နမူနာ (2019) တွင်ညစ်ညမ်း (PPUS) ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏စကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ
အင်တာနက်လိင်စွဲလမ်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးအဖွတျ: လိင်၏အခန်းကဏ္ဍကိုကိုစိစစ် (2017)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု - တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ (2018)
Non-paraphilic ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနှင့်အတူငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်၏အသက်အရည်အသွေး: တစ်ခုကရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးလေ့လာမှု (2019) - Jon Grant က
အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019) - အခမဲ့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက်လူမျိုး, ကျား, မ, နှင့်လိင် script များ
မျိုးကွဲညစ်ညမ်း (1994) တွင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့် sexism
လိင် objectified မိန်းမတို့အဘို့လျှော့ချစိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုတုံ့ပြန်မှု: တစ်ခု fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (2017)
အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားနမူနာ (2019) တွင်အားဖြည့်အာရုံသီအိုရီများနှင့်ပြဿနာလောင်းကစား
relational စျမယား, condomless လိင်နှင့်အင်္ဂလိပ်နမူနာ (2018) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ညစ်ညမ်း၏သဘောထားအမြင်
မေတ္တာနှင့် Birjand, အီရန် (2015) တွင်လက်ထပ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားညစ်ညမ်းနှင့်အတူအိမ်ထောင်ရေးစိတ်ကျေနပ်မှု၏ relationship
relationship အရည်အသွေးကိုကျူးလွန်ဆက်ဆံရေး (2016) တွင်တရုတ်လိင်ကွဲယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများခန့်မှန်း
, ထကြွလွယ်သောစွဲလမ်းနှင့်လိင်လိုတဲ့သဘောထားကိုနှင့်အပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး: လူသားများတွင်စမ်းသပ်နှင့်အလားအလာလေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု (2019)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံလွှ Website များ၏တစ်ဦးအားသုံးသပ်ခြင်း (2018)
ဆန်းစစ်ခြင်း: တစ်ရောဂါအဖြစ်လိင်စွဲ: အကဲဖြတ်ဘို့အထောက်အထား, Diagnosis နှင့်ဝေဖန်သူများမှတုံ့ပြန်မှု (2015)
တူညီပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့: ထဲမှာ Hypersexual Disorder နှင့်အတူယောက်ျား၏လက်တွေ့စရိုက်လက္ခဏာတွေ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] လေ့လာမှု (2019)
ကိုမြင်လျှင်ပုလ်ယောက်ျား, sexy မိန်းမ, ကျား, မကွဲပြားမှု: ကျား၏ညစ်ညမ်းမှ Exposure နှင့်သိမြင်မှုတည်ဆောက်မှုများ (1997)
ကလေးများအတွက် self-အစီရင်ခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု: တက္ကသိုလ်နမူနာများတွင်လိင်ကွဲပြားမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (1996)
လိင်စွဲလမ်းနှင့်လောင်းကစားရောဂါ: တူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု (2015)
လိင်စွဲ: psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်မှီခိုနှင့်အတူတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ် (2003)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညျသှေးအတွက်လိင်ကွာခြားချက်များ: Impulse သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရေး၏တစ်ဦးကအမည်? (2013)
အင်တာနက်အပေါ်လိင်: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (2004) နဲ့ယောက်ျားကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု furthering
အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်: အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းများအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များနှင့်ဂယက်ရိုက် (2001)
လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ် 'n' လိပ်: ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇ polymorphic တစ် function ကိုအဖြစ်ဘုံ mesolimbic activation hypothesizing (2012)
Sexism နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု: အတိတ်ရှင်းပြခါနီး (တရားမဝင်သော) ရလဒ်များကို (2004)
ငါး Shades ထူးအိမ်သင်၏ & Emerging အရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများစာရှုသူများအနက်လိင်အရအခွင့်အရေးသဘောထားများကို (2015)
sexting-ual သည်အနာပျောက်စေသော: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှစုံတွဲနှင့်မိသားစုနည်းပညာမူဘောင်၏လျှောက်လွှာ (2017)
စွဲ၏ Neurobiology, အောက်စ်ဖို့ Press မှ (2016) မှလိင်စွဲလမ်းမျြးအခနျးကွီး
လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် hypersexual ရောဂါ - တူညီသောပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးအနှုန်းများ? စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2014)
လိင်စွဲလမ်းသို့မဟုတ် Hypersexual Disorder: အပင်ပြဿနာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ? အဆိုပါစာပေ၏တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2013)
ကျူးကျော်တုံ့ပြန်လိင်စိတ်နိုးထ: Ideological ရန်လိုခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု (1986)
ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသားများနှင့်ညစ်ညမ်း၏သက်ရောက်မှု (2004) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆောပိုလို, ဘရာဇီး (2018) တွင်ကုသမှု-ရှာကြံလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-အယူအဆနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူငယ်ရွယ်တရုတ်ဟောင်ကောင်ယောက်ျား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သိမြင်မှုရလဒ်များ: ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အအကျိုးသက်ရောက်မှု (2019)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, Mood, နှောင်ကြိုးစတိုင်, Impulse နှင့်ကိုယ်ပိုင်လေးစားမှုကိုစှဲကျဘာ (2019) အတွက်ခန့်မှန်းအချက်များအဖြစ်
သစ်ခမည်းတော်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်: လိင်နီးစပ်ခြင်းကိစ္စများ (2018)
အင်တာနက်ကိုခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် (2018) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ် - အခန်း
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Impulse နှင့်လူကြီးများအတွက်ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ: ဆန်းသစ်ဒိုမိန်း-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ (2016) ဆီသို့
ကလေးသူငယ်လိင်အမြတ်ထုတ်ခြင်းပစ္စည်းများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုများ (CSEM) စားသုံးသူတွေ: ပြင်းထန်မှုကျော်အချိန်လေးပုံစံများ (2018)
ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှုမုဒိမ်းကျင့်ရန်ကောလိပ်ကျောင်းသားများလိင်တုန့်ပြန်: inhibitory နှင့် disinhibitory သက်ရောက်မှု (1980)
သုံးညစ်ညမ်းမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: တစ်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာရှင်းပြချက် (2000) ခါနီး
လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing (1998)
တစ်ဦးက Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း (2018): မီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်ကိုယ်ပိုင် Objectification Sexualizing
လိင်ကအကဲဆတ်သောမီဒီယာများနှင့်လိင်တူများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား (2017) များထဲတွင် Condomless စအိုလိင်
လိင်ကလိင်တူချစ်သူအကြားတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှတ်တိုင်အဖြစ်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမီဒီယာထိတွေ့မှု, ရိုးရိုး, လူ (2018) နဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့သူကတခြားယောက်ျား
လိင်ကအကဲဆတ်သောမီဒီယာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားအားဖြင့်အသုံးပြုခြင်း: ဂေးတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ခြင်း, ရိုးရိုးနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလိင်ကွဲအမျိုးသားများ (2016)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာ, ကျား, မကွဲပြားမှုများနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သီအိုရီ (1996)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားများ (2014) အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအွန်လိုင်းမီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်
လိင်ကအကဲဆတ်သောအွန်လိုင်းမီဒီယာ, ခန္ဓာကိုယ်ကျေနပ်မှုနှင့်အမျိုးသားများနှင့်အတူလိင်ရှိသည်သောယောက်ျားများထဲတွင် Partner မြျှောလငျ့: တစ်အရည်အသွေးလေ့လာမှု (2017)
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှု (1986) တွင်ပြောင်းလဲ Preferences ကို
ကို virtual လိင်ကတခြားလိင်စှဲနဲ့တူဆကျဆံခံရသငျ့သလော (2000)
အသက်ကြီးလူကြီးများ (2019) တွင်ကျဘာစွဲ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာ
တူညီခြင်းနှင့်လောင်းကစား Disorder နှင့်အခြားစွဲလမ်းကဲ့သို့အပြုအမူ (2019) အကြားကွာခြားချက်များ
အခွအေနေ Psychogenic Anejaculation: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှု (2014) ။ porn-သွေးဆောင်သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေး။
အားလုံးပြီးနောက် Size ကို Matters: SEM စားသုံးမှုအင်္ဂါများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ချစ်ခင်လေးမြတ် (2019) သြဇာလွှမ်းမိုးကြောင်းစမ်းသပ်အထောက်အထား
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ-Related ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာများအတွက်လူမှု Desire ဘက်လိုက်မှု: ဘာသာတရား၏အခန်းက္ပ (2017)
Pedophilia အတွက် Frontostriatal စနစ်နှင့် Cerebellum အတွက်အခြေခံအဆောက်အဦးနှောက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ (2007)
လေ့လာရေး Porn အသုံးပြုသူများအတွက် (စာနာထောက်ထားရေး) စက်လှေကားနှင့်လေ့ Find
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn စွဲချိတ်ဆက်လေ့လာရေးနှင့်အောက်ပိုင်း arousal
လေ့လာမှု porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု (2017) တို့အကြား link ကိုရှုမြင်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တဏှာပုံမှန်ဘာအသုံးပြုသူများ (2015) ၏နမူနာထဲမှာဘာစွဲဆီသို့သဘောထားတွေကိုခန့်မှန်းပြီး
ကုသရန်ခက်ခဲ hypersexual ရောဂါ (2016) တွင် transcranial သံလိုက်ဆွ၏အောင်မြင်သောအသုံးပြုမှု
Self-ရိပ်မိပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်လိင်ကွဲယောက်ျား၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှု: တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု (2017)
အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဖမ်းခံရအမျိုးသားများအတွက်များထဲတွင် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ကျူးလွန်သူအကြားတွင်အဆိုပါအသင်း (2018)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အကျိုးဆက်များ: အဆိုပါပဏာမယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကျိုးဆက်များစကေး၏သက်တမ်း (2007)
လိင်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားလိင်စွဲလမ်း၏ ratings မှကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအချက်များနှင့်ကျား, မများ၏အလှူငွေ (2018)
မြောက်အမေရိက, ဥရောပ, နှင့်တရုတ် (2019) တွင်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားဒုက္ခဆင်းရဲများ၏ Cross-ယဉ်ကျေးမှုစကားရပ်
အင်တာနက်အမှောင်ခြမ်း: တိကျတဲ့အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူမှောင်မိုက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏အသင်းအဖွဲ့များများအတွက်ပဏာမသက်သေအထောက်အထား (2018)
တစ်အကြီးစားအမျိုးသားနမူနာ (2018) နှင့်အတူဘာဂန်-ယေးလ်လိင်စွဲလမ်းစကေး၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အတည်ပြုခြင်း
Dual Control Model - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းခြင်းနှင့်အပြုအမူများတွင်လိင်ဆိုင်ရာတားမြစ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၏အခန်းကဏ္ ((၂၀၀၇)
အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများ၏လက်ခံမှုအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ: တစ်ဦးကလယ်ပြင်စမ်းသပ်မှု (1981)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး '' ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (2019) ရက်နေ့တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
အမြိုးသမီးမြားရဲ့သဘောထားတွေနဲ့လိင်အခန်းကဏ္ဍကျပုံစံ (1987) ၏ဖြန်ဖြေအခန်းကဏ္ဍအပေါ်မုဒိမ်းကျင့်ဒဏ္ဍာရီညစ်ညမ်း၏ဆိုးကျိုးများ
အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုအပေါ်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏သက်ရောက်မှု: အသုတေသနတစ်ဦးကပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (2006)
ကျား, မ-based အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ်ညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာမှု၏သက်ရောက်မှု: ငါတို့သည်အဘယ်သို့သိနိုင်သနည်း (2016)
ပုဂ္ဂိုလ်-အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု-သိမှတ်ခံစားမှု-Execution ၏ Interaction စွဲလမ်းအပြုအမူတွေများအတွက် (ကျနော်-PACE) မော်ဒယ်: Update ကိုအင်တာနက်သုံးစွဲပုံမမှန်ကျော်လွန်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုမှ General များနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေ (2019) ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဇာတ်ကောင်များ၏သတ်မှတ်ချက်
မာရှယ် McLuhan ရဲ့မီဒီယာသီအိုရီ၏အလင်းအတွက်အလတ်စားမယ့်အစား၏အိမ်ထောင်ရေး :: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ် (2017)
ရှကျရှံ့ခွငျးသဘောထားကိုနှင့် Hypersexuality (2019) အကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ကိုယ်ပိုင်သနားကြင်နာခြင်း၏သုံးသပ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
ငါ၏အကျူးကျော်များ၏အရာဝတ္ထု: လိင် objectification အမျိုးသမီးတွေဆီသို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်တိုးပွါး (2018)
ထိတွေ့နိုင်သော၏ ORGANIZATION: Fantasy, Image ကိုများနှင့်အမျိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (2017)
အဆိုပါညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံတဏှာမေးခွန်းလွှာ: Psychometric Properties ကို (2014)
လိင်-offending အပြုအမူ (1994) တွင်တစ်ဦးပံ့ပိုးအချက်အဖြစ်အော်ဂဲနစ် left posterior hemisphere ကမောက်ကမဖြစ်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ
အဆိုပါ Pudding ၏သက်သေပြချက်အရသာအတွက် Is: ဒေတာများကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) Compulsive မှ & Models နှင့်ယူဆချက်ဆက်စပ်စုံစမ်းဖို့လိုအပျနသေ
တစ်ဦးပစ္စည်း-မှီခိုပြည်သူ့အင်အားအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ရန်လိုကြားဆက်ဆံရေး (2015)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Compulsive ဖို့ကိုယ်ပိုင်များ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အကြားအမြင်ရနှင့်ဆက်စပ် aspect များ၏ဆက်ဆံရေး (2019)
များအတွက် Desire, နှင့်ကြမ်းတမ်းသောလိင် (2018) တွင်ပါဝင်လာရန်အွန်လိုင်းလိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းများထဲတွင်အဆိုပါဆက်ဆံရေး
Porn စာတတ်မြောက်ရေးပညာရေး (2017) ၏ Attenuating အခန်းက္ပ: အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသမီး၏လိင် Objectification ကြားဆက်ဆံရေး
ယောက်ျား (2010) နဲ့လိင်ရှိသည်သောသူမှာ-အန္တရာယ် HIV အနှုတ်လူတို့တွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားဆက်ဆံရေး
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံရှာကြံနှင့်ပြဿနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေး: အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်တစ်ဦးကတည်းဖြတ်ဖျန်ဖြေမော်ဒယ်နှင့်တတိယလူတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှု (2018)
digisexuality ၏မြင့်တက်: ကုထုံးစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ (2017)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive အတွက်နျ Classical ကိုက်၏အခန်းက္ပ: တစ်ဦးကရှေ့ပြေးလေ့လာမှု (2014)
အကြမ်းဖက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှစမ်းသပ်ထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလျော့ပါးစေရန်အတွက်ပညာရေးတင်ပြချက်၏အခန်းကဏ္ဍကို: တစ် Meta-analysis သည် (1996)
ကြည့်ရှုခြင်းပြဿနာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ (2018) တွင်အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား၏အခန်းက္ပ
hypersexual ရောဂါ (2016) ၏ pathophysiology အတွက် neuroinflammation ၏အခန်းကဏ္ဍကို
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူ (2007) တွင်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကို
Sensation ၏အခန်းက္ပရှာနဲ့ R-rated Movie, အစောပိုင်းပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Initiative (2018) တွင်အကဲခတ်
အတည်ပြုခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Preferences ကိုနှင့်စွဲလမ်းမှုရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူ Links များ (2015): အဆိုပါက Short ပြင်သစ်ကအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်းအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှ Adapted
ရိုမန်းတစ်အပေါင်းအဖေါ်များအဘို့အကြီးစားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပါဝင်ပတ်သက်မှု၏သိသာထင်ရှားသော: သုတေသနနှင့်လက်တွေ့အကျိုးသက်ရောက်မှု (2002)
လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်အနောက်အဇာဘိုင်ဂျန်-အီရန်နိုင်ငံမှာကွာရှင်း-မေးအမျိုးသမီးများအကြားညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏စစ်တမ်း: တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2018)
မြိုးမြိုးလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ (2013) ၏နျောအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအသုံးပြုမှု
ညစ်ညမ်း, စွဲလမ်းလက္ခဏာတွေ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကြောင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီရှာဖွေမှုများအသုံးပြုမှု
Porn Do ကြှနျုပျတို့ကိုအပိုင်းသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်, ကွာရှင်းအပေါ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု longitudinal အကျိုးသက်ရောက်မှု, (2016)
အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်သုံးစွဲသူအသက်အပိုင်းအခြား (2015) ၏တစ်ဦးတိုးလာနားလည်မှုဆီသို့
အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက် Transvestic fetishism: ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု (2004)
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2018) ကုသ
compulsive ကျဘာအပြုအမူ (2008) ၏ကုသမှု
Naltrexone နှင့်အတူ compulsive ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှုကုသမှု: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ (2015)
အမျိုးသားများအတွက် (2016) နှင့်အတူလိင်ဖူးသူကားအဘယ်သူအမျိုးသားများအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အပြုအမူယန္တရားများပုံစံလုပ်ရန် Hypersexuality နားလည်ခြင်း
ကလေးများအတွက်တက္ကသိုလ်ယောက်ျား '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှု: တစ် nonforensic နမူနာထဲမှာ "pedophilia" ၏အလားအလာညွှန်းကိန်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း (1989)
အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်အမျိုးသားများရဲ့ကောင်းပြီ-ခံ (2005) ၏အသုံးပြုမှု
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် Ventral Striatal reactivity (2018)
ပိုမိုနှစ်သက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲ (2016) ၏ရောဂါလက္ခဏာများဆက်နွယ်နေကြောင်းသောအခါ Ventral striatum လှုပ်ရှားမှု
ငယ်ရွယ်ဆွီဒင်အမျိုးသားများ (2017) ၏ကိုယ်စားလှယ်အသိုင်းအဝိုင်းကနမူနာများတွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု: ကလေးညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း
ဘယ်လိုအဘယ်သူကိုကပြဿနာဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း, (2009)
အကာအကွယ်မဲ့စအိုလိင်ဆက်ဆံသရုပ်ဖော်ထားတဲ့ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်း: ယောက်ျားနှင့်အတူလိင်ရှိသည်သောလူတို့တွင် HIV ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အသက်ရောက်မှုတွေရှိသနညျး (2012)
အမေရိကန်တစ်ဝှမ်းဂေးများနှင့်ရိုးရိုးယောက်ျား (2017) အနက်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူကြည့်ရှုခြင်းလိင်အကဲဆတ်သောမီဒီယာနှင့်၎င်း၏အသင်းက
"အရွယ်ရောက်ပြီးသူ" ဗွီဒီယိုများ (1991) တွင် themes များအဖြစ်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်း
Visual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု-Cue သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်? လူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (2016) ရက်နေ့တွင်ဦးနှောက် Imaging ကတွေ့ရှိချက်ပြန်ဆိုဘို့တစ်ဦးရဲ့အမြင်
Voyeuristic Disorder နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ: တစ်ဦးကဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ (2018)
ကျနော်တို့သူတို့ရဲ့လိင်အင်္ဂါအကြောင်း 3,670 အမျိုးသမီးများနေ့မေး - ဒီနေရာတွင် (2019) သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောသည်ဘာလဲ
အဘယျသို့အပြုအမူ Do Young ကလိင်ကွဲသြစတြေးလျညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ကြသည်မဟုတ်လော တစ်ဦးက Cross-Section လေ့လာမှု (2018)
ဆွဲဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲ ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး (2015) မှဆက်ဆံရေးအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလှုံ့ဆော်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုထိန်းချုပ်ရေးထဲကခံစားရသည့်အခါ: ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2017) ၏အလယ်အလတ် Effect
စကားများမလုံလောကျသညျ့အခါ: နှိပ်စက်အမျိုးသမီးတွေ (2004) အပေါ်ညစ်ညမ်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ရှာဖွေရေး
စိတ်ကိုဝံ့မနိုင်ဘယ်မှာ: တစ်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏စွဲလမ်းအသုံးပြုမှုကိစ္စနှင့်ကလေးဘဝကိုစိတ်ဒဏ်ရာနဲ့ဆက်ဆံရေး (2018)
အဆိုပါလူကြီး Pair ကို-ဘွန်းဆက်ဆံရေး (2009) တွင်တစ်ဦးနှောင်ကြိုးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှင့် Concomitant လှညျ့စားခွငျးမယားများ '' အချင်းယောက်ျား၏အတွေ့အကြုံ ''
အမျိုးသမီးများ, အမျိုးသမီးလိင်နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစွဲများနှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်း (2012)
တစ်သီအိုရီမော်ဒယ်ဆီသို့ (2017): မိမိတို့၏အထီးမိတ်ဖက် '' ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်ဆက်ဆံရေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ကိုယ်ပိုင်, ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်မှုအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့သဘောထားအမြင်
X ကို Views စာနှင့် count: Gender Microaggression (2015) အဖြစ်မုဒိမ်း-oriented ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်စိတ်ဝင်စားမှု
ဒစ်ဂျစ်တယ်လိင်, အပိုင်း 1 အပေါ် xHamster အစီရင်ခံစာ: ရိုးရိုး (2019)
သူတို့ရဲ့အထီးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ရဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတစ်ဦး Correlate အဖြစ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု (2012) ၏လူငယ်စာအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေရဲ့အစီရင်ခံစာများ
DeltaFosB: sensitive ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ
DeltaFosB: တစ်ဦးကမော်လီကျူးဂိတ်နျူကလီးယပ် Accumbens အတွင်းလှုံ့ဆော်လုပ်ငန်းစဉ်လော (2006)
ဆုတ်ခွာ 2014 (ဖြစ်ပေါ်နိုင်နှင့်အီသနော-သွေးဆောင် locomotor ာင်းဖို့ခံနိုင်ရည်အဖြစ်ခွဲခြား outbred ဆွစ်ဇာလန်ကြွက်တွေမှာ FosB / ΔFosBစကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများ induces
PIED အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူသက်သေခံချက်: ကိုကြည့်ပါ -မီဒီယာအတွက် porn-သွေးဆောင် ED: အဓိကအားကျွမ်းကျင်သူများက
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ -
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင် Jay Giedd မှဗီဒီယိုတင်ပြချက် - ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်တော်လှန်ရေး